‘Fantaro Izay Zava-dehibe Kokoa’ (Filipianina 1:10) | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Umbundu Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
‘Fantaro izay zava-dehibe kokoa.’—FIL. 1:10.
Inona no toky ananantsika rehefa mandinika ny fahitana hitan’i Isaia, Ezekiela, ary Daniela?
Inona no ianaranao, rehefa misaintsaina hoe mifantoka amin’izay zava-dehibe kokoa ny fandaminana eto an-tany?
Tapa-kevitra ny hanao inona ianao, noho ity fianarana ity?
1, 2. Inona no faminaniana momba ny andro farany nahaliana ny mpianatr’i Jesosy, ary nahoana?
NILAZA tamin’ny mpianany i Jesosy, indray mandeha, hoe horavana ny tempoly. (Mar. 13:1-4) Nanahiran-tsaina an’i Petera, Jakoba, Jaona, ary Andrea izany, ka nanontany an’i Jesosy izy ireo tsy ela taorian’izay hoe: “Lazao aminay hoe rahoviana no hitranga izany, ary inona no ho famantarana ny fanatrehanao sy ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity?” (Mat. 24:1-3) Nisy zavatra maromaro hanova ny fiainan’ny olona àry notanisain’i Jesosy, izay hitranga alohan’ny handravana an’i Jerosalema nefa koa famantarana ny faran’ny tontolon’i Satana. Nitanisa zavatra mampahatahotra maromaro izy, anisan’izany ny ady, mosary, ary ny fitomboan’ny fandikan-dalàna. Nilaza zavatra tsara koa anefa izy, izay nahaliana ny mpianatr’i Jesosy, dia ny hoe: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.”—Mat. 24:7-14.
2 Nahafinaritra azy ireo ny nitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana niaraka tamin’i Jesosy. (Lioka 8:1; 9:1, 2) Mety ho tsaroan’izy ireo ny teniny hoe: “Be tokoa ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy. Koa iangavio ny Tompon’ny vokatra mba haniraka mpiasa hijinja ny vokatra.” (Lioka 10:2) Mety ho nieritreritra anefa izy ireo hoe: ‘Ahoana no hahafahana mitory “maneran-tany” ka “ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra”? Avy aiza ny mpiasa hanao an’io asa io?’ Tsy azon’izy ireo an-tsaina mihitsy ny fomba miavaka hahatanterahan’ireo teny ao amin’ny Matio 24:14.
3. Nahoana no zava-dehibe amintsika ny tenin’i Jesosy ao amin’ny Lioka 21:34, ary inona no fandinihan-tena tokony hataontsika?
3 Tanteraka amin’izao androntsika izao ny faminanian’i Jesosy. Olona an-tapitrisany no mitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana maneran-tany. (Isaia 60:22) Nilaza koa anefa i Jesosy hoe ho sarotra amin’ny olona sasany ny hanao loha laharana ny asa fitoriana eo amin’ny fiainany. Be dia be mantsy ny zavatra ataon’izy ireo ka lasa ‘hanavesatra’ azy ireo izany. (Vakio ny Lioka 21:34.) Zava-dehibe amintsika ireo tenin’i Jesosy ireo, satria misy mpanompon’i Jehovah lasa manadino an’izay zava-dehibe kokoa. Hita izany amin’ny fanapahan-kevitra raisin’izy ireo momba ny asa, fianarana ambony, fialam-boly, ny fikatsahana harena, ary ny fanatanjahan-tena. Ny hafa indray reraka noho ny fanerena sy ny fanahiana eo amin’ny fiainana. Miezaha àry handini-tena. Diniho hoe inona no tena zava-dehibe aminao eo amin’ny fiainana?
4. a) Inona no vavaka nataon’i Paoly ho an’ny Kristianina tany Filipy, ary nahoana? b) Inona no hodinihina ato amin’ity lahatsoratra ity sy ilay manaraka? Ary inona no soa ho azontsika avy amin’izany?
4 Nila niezaka mafy ireo Kristianina tamin’ny taonjato voalohany, mba hanao loha laharana ny fanompoana an’i Jehovah. Izany no nahatonga ny apostoly Paoly hivavaka ho an’ireo Kristianina tany Filipy, mba ‘hamantaran’izy ireo izay zava-dehibe kokoa.’ (Vakio ny Filipianina 1:9-11.) Maro tamin’ireo Kristianina tamin’izany no toa an’i Paoly, ka ‘sahy nitory ny tenin’Andriamanitra tsy amin-tahotra.’ (Fil. 1:12-14) Toy izany koa fa maro amintsika no sahy mitory ny Tenin’Andriamanitra. Vao mainka anefa hampahery antsika ny mandinika an’ity lahatsoratra ity, satria ho hitantsika hoe ahoana no ampiasan’i Jehovah ny fandaminany, mba hahatanteraka ny Matio 24:14. Inona no ataon’ny fandaminan’i Jehovah ankehitriny, ary nahoana izany no mandrisika antsika sy ny fianakaviantsika? Hanampy antsika izany mba ho be zotom-po kokoa amin’ny fitoriana. Hodinihintsika ao amin’ny lahatsoratra manaraka hoe inona no hanampy antsika haharitra amin’ny fanompoana sy hiara-mandeha foana amin’ny fandaminan’i Jehovah.
NY FANDAMINAN’I JEHOVAH ANY AN-DANITRA
5, 6. a) Nahoana i Jehovah no nanome fahitana momba ny fandaminany any an-danitra? b) Inona no hitan’i Ezekiela tamin’ny fahitana?
5 Maro ny zavatra tsy nasain’i Jehovah nosoratana ao amin’ny Teniny. Tsy nolazainy, ohatra, ny tsipiriany mahakasika ny fomba fiasan’ny atidoha na ny fomba fiasan’izao rehetra izao, na dia hoe mety hahafinaritra antsika aza izany! Nanome fanazavana ho antsika anefa i Jehovah mba hahafahantsika mahatakatra ny fikasany sy hankatò azy. (2 Tim. 3:16, 17) Tena mahaliana antsika àry ny hoe resahiny amintsika ny momba ny fandaminany tsy hita maso. Tena faly isika rehefa mamaky ny fanazavana momba ny fandaminan’i Jehovah any an-danitra, izay nosoratana ao amin’ny bokin’i Isaia, Ezekiela, Daniela, ary Apokalypsy. (Isaia 6:1-4; Ezek. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Apok. 4:1-11) Toy ny hoe nosokafan’i Jehovah ny ridaon’ny lanitra, mba hahafahantsika mahita izay mitranga any. Nahoana izy no nanao izany?
6 Tsy tian’i Jehovah ho hadinontsika hoe anisan’ilay fandaminany eo amin’izao rehetra izao isika. Miasa mafy ny fandaminany any an-danitra mba hanatanterahana ny fikasany. Hitan’i Ezekiela, ohatra, ny fandaminan’i Jehovah any an-danitra, izay aseho toy ny kalesy goavam-be iray. Mandeha haingana be izy io, ary afaka miova lalana tampoka. (Ezek. 1:15-21) Mahavita lalana lavitra be ilay kalesy isaky ny mihodina ny kodiarany. Hitan’i Ezekiela koa ilay mitaingina an’ilay kalesy. Hoy izy: “Hitako fa nisy zavatra namirapiratra hoatran’ny metaly nanjelatra sy hoatran’ny afo nanodidina azy ... Hoatran’ny voninahitr’i Jehovah no fahitana an’ilay izy.” (Ezek. 1:25-28) Tsy maintsy ho nampitolagaga an’i Ezekiela ilay fahitana! Hitany i Jehovah mifehy tsara ny fandaminana, ary mitarika azy io amin’ny alalan’ny fanahy masina. Tena mahavariana tokoa ny fomba ampisehoana ny fandrosoan’ny fandaminan’i Jehovah any an-danitra!
7. Nahoana ny fahitana hitan’i Daniela no manampy antsika hatoky an’i Jehovah sy Jesosy?
7 Manampy antsika hatoky an’i Jehovah sy Jesosy koa ny fahitana hitan’i Daniela. Hitany i Jehovah, dia “Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be”, nipetraka teo ambony seza fiandrianana toy ny afo miredareda. Misy kodiarana ilay seza fiandrianana. (Dan. 7:9) Tian’i Jehovah ho hitan’i Daniela hoe mandroso ny fandaminany, ary miasa mba hanatanteraka ny fikasany. Hitan’i Daniela koa i Jesosy, izay “toy ny zanak’olona”, ary notendren’i Jehovah izy hiandraikitra ny fandaminany eto an-tany. Tsy taona vitsivitsy monja akory i Jesosy no hitondra ny olombelona. Hoy ny Baiboly: “Ny fitondrany dia fitondrana haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra fa tsy handalo, ary ny fanjakany tsy ho rava.” (Dan. 7:13, 14) Mandrisika antsika izany fahitana izany mba hatoky an’i Jehovah sy hankasitraka ny zavatra ataony. Mandrisika antsika hatoky ny fitarihan’i Jesosy koa izany, satria matoky azy i Jehovah matoa nanome azy ny “fitondrana sy ny voninahitra ary ny fanjakana.”
8. Inona no vokatry ny fahitana avy amin’i Jehovah teo amin’i Ezekiela sy Isaia, ary inona no tokony ho vokatr’izany eo amintsika?
8 Inona no tokony ho vokatr’ilay fahitana momba ny fandaminan’i Jehovah any an-danitra eo amintsika? Azo antoka fa ho talanjona sy hanetry tena toa an’i Ezekiela isika, noho ny zavatra tanterahin’i Jehovah ao amin’ilay fahitana. (Ezek. 1:28) Mandrisika antsika hanao toa an’i Isaia koa ny fisaintsainana fa mandroso ny fandaminan’i Jehovah. Rehefa avy nahita fahitana momba ny any an-danitra izy, ka nisy fanasana hoe iza no hirahina hanambara ny asan’i Jehovah, dia namaly avy hatrany izy hoe: “Intỳ aho iraho!” (Vakio ny Isaia 6:5, 8.) Natoky i Isaia fa ho afaka hiatrika ny zava-tsarotra rehetra izy, noho ny fanampian’i Jehovah. Toy izany koa fa tokony hahatonga antsika ho talanjona, sy ho vonona hanao ny asan’i Jehovah, ny fisaintsainana momba ny fandaminan’i Jehovah any an-danitra. Mampahery tokoa ny mandinika ny fandaminan’i Jehovah, izay tsy mitsahatra mandroso sy miasa mafy mba hanatanterahana ny fikasany!
NY FANDAMINAN’I JEHOVAH ETO AN-TANY
9, 10. Nahoana no ilaina ny fandaminan’i Jehovah hita maso?
9 Nanangana fandaminana eto an-tany i Jehovah, tamin’ny alalan’ny Zanany, ary miara-miasa amin’ilay fandaminany any an-danitra izy io. Nahoana anefa no ilaina ny fandaminana eto an-tany mba hamitana an’ilay asa resahin’ny Matio 24:14? Handinika antony telo isika.
10 Voalohany, nilaza i Jesosy fa hitory hatrany “amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany” ny mpianany. (Asa. 1:8) Faharoa, mila sakafo ara-panahy sy fampaherezana ireo olona hanao an’io asa io. (Jaona 21:15-17) Fahatelo, mila miara-mivory izy ireo mba hahafahany miara-manompo an’i Jehovah sy mianatra ny fomba hanatanterahana an’io asa io. (Heb. 10:24, 25) Tsy ho vita ireo rehetra ireo raha tsy misy fandaminana voalamina tsara.
11. Ahoana no hampisehoantsika fa manohana ny fandaminan’i Jehovah isika?
11 Ahoana no hampisehoantsika fa manohana ny fandaminan’i Jehovah isika? Manao izany isika raha matoky an’ireo rahalahy nasain’i Jehovah sy Jesosy hitarika ny asa fitoriana. Afaka mampiasa ny fotoanany sy ny heriny ireny rahalahy ireny mba hanaovana zavatra hafa, kanefa tsy izany no ataon’izy ireo. Inona anefa no tena ifantohan’ny fandaminan’i Jehovah eto an-tany?
MIFANTOKA AMIN’IZAY “ZAVA-DEHIBE KOKOA” NY FANDAMINANA ETO AN-TANY
12, 13. Ahoana no hanatontosan’ny anti-panahy ny andraikitr’izy ireo, ary nahoana izany no mampahery anao?
12 Misy anti-panahy za-draharaha notendrena mba hiandraikitra sy hampandroso ny asa fitoriana ao amin’ny tany misy azy. Mangataka ny fitarihan’i Jehovah amin’ny alalan’ny vavaka izy ireo rehefa hanapa-kevitra, ary mitady tari-dalana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra. Ataon’izy ireo ‘jiro ho an’ny tongony izy io, sady fanazavana ny lalany.’—Sal. 119:105; Mat. 7:7, 8.
13 Mifantoka amin’ny “fanompoana” ireny anti-panahy ireny, tsy misy hafa amin’ireo rahalahy nitarika ny asa tamin’ny taonjato voalohany. (Asa. 6:4) Tena faly izy ireo mahita fa mandroso be ny asa fitoriana ao amin’ny tany misy azy sy maneran-tany. (Asa. 21:19, 20) Tsy mamorona fitsipika sy fomba fiasa maro be izy ireo mba hampandrosoana ny asa fitoriana, fa manaraka kosa ny tari-dalan’ny Soratra Masina sy ny fitarihan’ny fanahy masina. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 15:28.) Modely tsara ho an’ny fiangonana ireny rahalahy ireny, rehefa manao izany.—Efes. 4:11, 12.
14, 15. a) Inona no fandaharana atao mba hanohanana ny asa fitoriana maneran-tany? b) Inona no tsapanao momba ny tombontsoanao manohana ny asa fitoriana?
14 Tsy hitan’ny ankamaroantsika ny asa mafy atao, mba hikarakarana sakafo ara-panahy amin’ny alalan’ny boky aman-gazety, fivoriana, ary fivoriambe. Mpiasa an-tsitrapo an’arivony no miasa mafy mba handika azy ireny amin’ny fiteny 600 mahery, mba ho faran’izay betsaka ny olona afaka mianatra momba ny “asa lehibe nataon’Andriamanitra.” (Asa. 2:7-11) Rahalahy sy anabavy tanora maro no miasa amin’ireo milina fanontam-pirinty mandeha haingana be, mba hamokarana boky sy gazety. Zaraina amin’ny fiangonana hatrany amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany izy ireny avy eo.
15 Be dia be ny fandaharana atao mba hanampiana antsika hifantoka amin’ny fitoriana ny vaovao tsara. Mpiasa an-tsitrapo an’arivony, ohatra, no manorina Efitrano Fanjakana sy Efitrano Fivoriambe, manampy ny tra-boina, manampy amin’ny resaka fitsaboana, mandamina fivoriambe, ary mampianatra any amin’ireo sekoly ara-baiboly. Mbola misy asa hafa ankoatra an’ireo, fa tsy hitantsika miharihary ny ankamaroan’izy ireny. Inona anefa no tanjona amin’ireny asa rehetra ireny? Natao izy ireny mba hanamorana ny fitoriantsika, mba hanampiana antsika handroso ara-panahy, ary mba hanampiana olona maro ho tonga mpanompon’i Jehovah. Tsy hitanao amin’izany ve hoe miasa mafy tokoa ny fandaminan’i Jehovah eto an-tany, ka manao loha laharana izay zava-dehibe kokoa?
TAHAFO NY FANDAMINAN’I JEHOVAH
16. Inona ny zavatra azo ianarana amin’ny fianarana samirery na Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana?
16 Manokana fotoana tsindraindray ve ianao mba hisaintsainana ny asa ataon’ny fandaminan’i Jehovah? Afaka manokana fotoana mba hanaovana fikarohana momba ny fandaminana ianao mandritra ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana na fianarana samirery, ary misaintsaina izay azo ianarana avy amin’izany. Tena mahaliana, ohatra, ny mianatra momba ny fahitana hitan’i Isaia, Ezekiela, Daniela, ary Jaona. Manampy anao hahafantatra momba ny fandaminana koa ilay boky hoe Vavolombelon’i Jehovah—Mpitory ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny boky hafa. Eo koa ireo DVD miresaka momba ny fandaminana.
17, 18. a) Ahoana no nandraisanao soa tamin’ity fianarana ity? b) Inona no fanontaniana mila saintsainintsika?
17 Mahasoa antsika ny misaintsaina ny asa ataon’i Jehovah amin’ny alalan’ny fandaminany. Enga anie isika hanahaka an’io fandaminana mahafinaritra io, ka ho tapa-kevitra ny hifantoka foana amin’izay zava-dehibe kokoa. Hanampy antsika izany mba ho tapa-kevitra toa an’i Paoly, izay nilaza hoe: ‘Tsy kivy izahay, satria manana izany fanompoana izany, araka ny famindram-po naseho taminay.’ (2 Kor. 4:1) Nampirisika an’ireo mpiara-miasa taminy koa izy hoe: “Aoka isika tsy ho sasatry ny manao ny tsara, satria amin’ny fotoana voatondro no hijinjantsika raha tsy reraka isika.”—Gal. 6:9.
18 Misy fanitsiana mila ataonao manokana ve na mila ataon’ny fianakavianao, mba hahafahanareo manao loha laharana izay zava-dehibe kokoa, eo amin’ny fiainana andavanandro? Afaka manatsotra ny fiainanao ve ianao na mampihena ny zavatra sasany ataonao, mba hahatonga anao hifantoka kokoa amin’ny asa fitoriana, izay zava-dehibe tokoa? Hodinihina ao amin’ny lahatsoratra manaraka ny zavatra dimy hanampy antsika hiara-mandeha foana amin’ny fandaminan’i Jehovah.